वास्तबमा किन हुन्छ योनि बाहिरी छाला कालो ? कारण यस्तो - Gokarna News from Nepal
शुक्रबार, साउन ०३, २०७६ by Gokarna News
प्रायःजसो महिलाहरुको शरिरको छालाभन्दा योनिको बाहिरी छाला फरक हुन्छ । महिलाहरु आफ्नो शरीरको रङसँग योनी बाहिरको छाला किन कालो भएको होला भनेर सोच्ने गर्दछन् । योनीको छाला कालो हुनु र अन्य कुराहरुमा केही सम्बन्ध हुन्छ कि भन्ने उनीहरुको चासो हुन्छ । यौनसम्पर्क गरेर कालो भएको कतिपयले महिलाहरुको सोचाई हुन्छ । तर के यी सोचाईहरु साँचो हुन त ? पुरुषको लिङ् र योनीको बाहिरी छाला किन कालो हुन्छ ? जानौं यसबारेमा ।
महिलामा प्रत्यक्ष रूपमा योनिलाई नै यौनअङ्ग मानिन्छ। महिलाहरूमा योनिबाहेक अन्य विभिन्न अङ्ग पनि यौनका दृष्टिकोणले संवेदनशील हुन्छन्। त्यसमध्ये केही प्रमुखका बारेमा छोटो चर्चा गरौं।
तपाईंले योनिलाई भन्नुभएको त पक्कै होइन होला, किनभने योनिद्वार मात्र बाहिरतिर हुन्छ। पक्कै तपाईंले भगोष्ठको कुरा गर्नुभएको हुनुपर्छ। हाम्रो बाहिरी छालाको रङ्ग फरक हुने जस्तै भगक्षेत्र तथा भगोष्ठको रङ्ग पनि फरक फरक हुन्छ। तपाईंको छालाको रङ्गअनुसार यी फरक फरक हुन सक्छन्। उदाहरणका लागि प्याजी, रातो, गुलाबी, खैरो वा कालो र यी सबै सामान्य हुन्।
किशोरावस्थामा पुगेपछि हार्मोनको प्रभावले यौनाङ्गमा केही परिवर्तन आउने भएकाले केही गाढा हुन्छ। के कुरा पक्का हो भने यौन उत्तेजना हुँदा उक्त क्षेत्रमा बढी रक्त प्रवाह हुने भएकाले यो बढी गाढा रङ्गको देखिन्छ, तर यौनसम्पर्क गरेका कारण नै यो सधैं कालो हुने होइन।
अनुहारको छालाको रङ्ग श्रृंगार गरेर परिवर्तन गरेजस्तै भंगक्षेत्रको रङ्ग परिवर्तन गर्ने एक सजिलो उपाय श्रृङ्गार गर्नु हो, तर अनुहारजस्तो यसलाई देखाएर हिँड्नु नपर्ने भएकाले यसको रङ्ग परिवर्तन गर्नु तथा रङ्गका बारेमा चिन्ता लिनु आवश्यक छैन। शंका लागे चिकित्सकसँग परीक्षण गराउनु बेस नै हुन्छ छ ।
तीस लाखमा बिक्यो एकजोडी खर्बुजा !
जुम्ल्याहा सन्तान ११ हप्ताको अन्तरमा जन्मियो, डाक्टरसमेत चकित !
आज दुई प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा
कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट शुभकामना व्यक्त
कश्मिर घटनाको विरोध गर्न नेपाल सरकारलाई पाकिस्तानी विदेशमन्त्री कुरेशीको आग्रह
म उपाध्यक्ष हुँदा पार्टी र देशलाई नै फाइदा हुन्छः वामदेव गौतम
सन्नी लियोनी नेपाल आउदैं
“प्रधानमन्त्रीमा मिर्गौलासम्बन्धी एन्टीबडी बढी देखियो”
Join 28,093 other subscribers